Daawo Warbixin” ku saabsan hano qaadka Beeraha Gobalka Mudug – Radio Muqdisho
Daawo Warbixin” ku saabsan hano qaadka Beeraha Gobalka Mudug
Deegaanka Xeerodhagaxleey ee gobolka mudug ayaa h meel ku wanaagsan Tabcashada Dalagyada waxaana ku yaala in ka badan 40 Beerood oo ay ka baxayaan nuucyada Qudaarta waxaana maalgashi ku sameeyay Dadka deegaanka iyagoo aan Taageeeo ka helayn gacan kale Deegaanka.
Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan Xaafiiska Hobyo ayaa u kuurgalay Xaaladda Beeralayda Deegaanka Xeerodhagaxleey si aan ugu dhiiro galino shaqada ay hayaan Muwaadiniintaan Soomaaliyeed Guddoomiyaha iskaashatada Beeraleeyda Deegaanka Xeerodhagaxleey Cali Carab Gabayre ahna ninkii ugu horeeyay Oo beer ka Beera Deegaanka ayaa sharaxaad ka bixinaya Dadaaladii uu kusoo bixiyay shaqadaan.
Cali Carab gabayre ayaa ugu baaqay Dadka kasoo jeeda Deegaanada Galmudug inay Maalgashi ku sameegaankaan si looga soo saaro Dalagyo looga maarmo Baahiyada loo qabo kan kayimaada Deegaanada kale.
Guddoomiye ku xigeenka Deegaanka Cabdi maxamuud jimcaale ayaa sheegay inay dadaal xoogan ku bixiyeen Balshada deegaanku Tabcashada Beeraha lkn ay jiraan Cabado haysa sida qalabka Beeraha””””Cod Mahad Maxamuud Jimcaale oo ka mid dhalinyarada wax soo baratay kana soo jeeda Deegaanka ayaa ku amaanay Beeralayda Xeerodhagaxleey Tabcashada Beeraha isagoona ugu baaaay Dowladda federalka iyo Maamulka Galmudug inay Caawinta Beeraleydaan.
Beeralayda Soomaaliyeed ayaa dadaal xoogan ugu jira tabcashada iyo soo saarida dalagyada kala duwan waxaana xusid mudan inay jiraan caqabado haysta marka loo eego dhinacayada Tababarada ku aadan kor u qaadista Aqoonta iyo qalabka Beeraha laakiin waa kuwo ay ka go,an tahay u shaqeynta Bulshada.
Sawir qaade Wariye Baashi Ali Haashi Wakiilka Hobyo
Jaamacadda Jamhuuriya oo bilowday todobaadka Jiheynta “SAWIRRO”
Wasiirka Amniga oo Denmark kula kulmay Wasiirada Arrimaha Dibadda iyo Socdaalka ee dalkaasi+Sawirro